Kedu ka esi etinye ihe n'ime ihe ndozi, na akpa akwa, mgbe ị na-akwagharị?
Otu esi eme ihe ziri ezi - ndụmọdụ dị mfe ga-eme ka ndụ gị dị mfe
Ozi gbasara otu esi eme ihe nke ọma ga-aba uru maka ndị chọrọ iji ohere n'efu na-etinye ihe ndị ọzọ. Usoro ndị dị ugbu a ga-aba uru iji tinye ihe n'ime ihe ndozi, igbe nke ihe nkedo, akpa akwa na akpa.
Kedu ka esi esi akwa akwa?
Iji chekwaa ihe dị mma, a haziri ndị nhazi pụrụ iche, nke ị nwere ike itinye ihe dị iche iche. N'ọtụtụ ọnọdụ ha na-etinye ha na kọlọtọ na shelves. Jiri ndokwa dị otú ahụ dị ka itinye ihe dị na kọlọtọ n'ụzọ ziri ezi:
Ọ dị mma ịchekwa bras na ọnọdụ edozi. Ndị na-ahazi pụrụ iche nwere alaka alaka oblong maka nzube a. Maka nkpuchi e ji emepụta obere akpa.
A na-atụ aro igwe akwa dị iche iche site na nha ma ọ bụ ihe onwunwe ma gbasaa n'ime ndị na-ahazi site n'ịkwagharị ala.
Maka akpụkpọ ụkwụ ka a na-ahazi ndị na-ahazi ihe na-etinye ọnụ na akpa, ebe a na-etinye akpụkpọ ụkwụ abụọ.
Kedu ka esi esi etinye ihe mgbochi n'ime ime ụlọ?
Iji chekwaa ohere dị na kọlọtọ, ị ga-achọ ịmara usoro dị mfe nke mpịakọta ihe. Ndị a bụ ndị kasị ewu ewu na ha:
Socks. Jikọọ ụzọ ma tụba ya na ọkara. Mgbe nke a gasị, tụgharịa n'ikiri ụkwụ ọzọ ma tinye nkwụsị ahụ n'ime akpa ahụ nke dị na nsọtụ. Ihe si na ya pụta bụ mgbọm.
Ngwunye ụmụaka. N'ịkọwa otu esi eji akwa akwa akwa akwa, ị kwesịrị ịṅa ntị na uwe. Tinye ihe ndị dị n'ihu gị ma tụba ha na ọkara n'ogologo, ma mgbe nke ahụ gasị, gbadaa akụkụ ahụ n'ime etiti na-agbakwaghachi ọzọ na ọkara.
Ụjọ. Mee ka mkpịsị ụkwụ ahụ daa. Gbanye aka n'akụkụ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, tụgharịa na ọkara, ma ọzọ, na-agbanye ala n'elu ka mkpịsị ụkwụ ghara ịgbanwuo. Nhọrọ a dịkwa mma maka ihe ejiji nwoke.
Jeans. Gbanye uwe ogologo ọkpa ahụ ma gbanwee akụkụ ahụ na-agagharị na etiti iji nweta eriri. Kpoo ihu nke uwe ogologo ọkpa na ala nke eriri. Ọ na-anọgide na-atụgharị akwa jeans ugboro atọ. A na-atụba ha na kọlọtọ ka e wee nwee akpa na n'elu nke ị nwere ike ikpebi ụdị jeans ọ bụ.
T-uwe elu. Buru uwe na-akpa na ọkara n'akụkụ ogologo ma kechie ha na etiti ogwe aka ahụ. Mgbe ahụ, tụba ha na ọkara ọzọ.
Tọọ. Dozie magazin na bọtịnụ ahụ na bọtịnụ. Kanye ihu elu na tebụl. N'etiti n'azụ azụ ahụ, tinye log. Na-agbanye oghere abụọ na etiti ma na-agbatị aka. Iji nweta ezigbo mpempe akwụkwọ, nke a ga-apịa na ọkara. Nọgide na-ewepụta magazin ahụ iji nweta otu ntanetị na nkedo n'elu.
Na jaket. N'ịchọpụta otú e si eme ihe nkwụsị nke ọma, anyị na-enye usoro dị mfe nke ga-abata n'aka mgbe enwereghị nghọta. Mee ka jaket ahụ bata na-apụ n'ebughị aka aka. Mgbe nke ahụ gasị, nụnye ogwe aka n'ebe ibe gị nọ, wee tụgharịa na ọkara.
Kedu ka esi eji akwa uwe dika usoro KonMari?
Otu ọkachamara na iweghachi akwụkwọ n'ụlọ Marie Condo na-enye ọtụtụ ndụmọdụ ndị bara uru ga-akụziri gị otu esi echekwa ihe n'ime ụlọ. Jiri ntụziaka a, dị ka ịtọ ihe dịka usoro KonMari n'ụzọ ziri ezi:
Na mbu, ị ga-ekekọrịta ihe na otu ma jiri nlezianya tụlee ha iji ghọta ihe dị mkpa na ihe na-abụghị.
Ọchịchị bụ isi bụ nchekwa nke ihe, nke a ga-enye ọdịdị anọ.
A na-atụ aro ihe n'ubu ka ịhazi ma nye iwu, dịka ọmụmaatụ, site na agba, nzube ma ọ bụ ịdị jụụ. Marie n'onwe ya jiri nhọrọ ikpeazụ.
Enwere ike ịchekwa obere ihe n'ime igbe, dịka ọmụmaatụ, site n'okpuru akpụkpọ ụkwụ nke zuru oke n'ime ihe ọ bụla.
Kedu ka esi etinye ihe ụmụaka n'ime igbe nke ihe ndozi?
A na-atụ aro ka ị dozie ihe na nke mbụ, kewaa ha site na oge na ugboro ugboro. Nke a na-emetụtakwa ọnọdụ ndị metụtara otu esi etinye ihe ụmụ ọhụrụ maka ụmụ amụrụ ọhụrụ n'ụzọ ziri ezi, ya bụ, ihe ndị dị gị mkpa ịbịarukwu onwe gị nso, na ndị na-adịghị adịkarị. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji igbe akpụkpọ ụkwụ maka nhazi, nke ị nwere ike idozi ihe na igbe maka nyocha ngwa ngwa. Wedata ihe site na usoro ndị a kọwara n'elu.
Kedu ka esi etinye ihe?
Ụzọ ndị na-enye gị ohere iji kọwaa ihe ga-aba uru ọ bụghị nanị na ụlọ mgbe ị na-ekpuchi kaadị ma ọ bụ igbe, ma, dịka ọmụmaatụ, n'oge nchịkọta igbe maka njem ma ọ bụ igbe maka ịkwagharị. Otutu n'ime ihe omimi banyere uzo esi achikota ihe ndi ozo bu ihe edere n'elu ma ha bara uru obuna mgbe ichikota akpa, mana enwere iwu ndi ozo nke ndi njem gburugburu uwa jiri.
Kedu ka esi etinye akwa n'ime akwa?
Nsogbu dị ezigbo mkpa bụ ịkwado ihe dị na akpa akwa iji kwado ihe niile ị chọrọ ma ọ dịghị ihe mebiri ya. N'ọnọdụ a, ndụmọdụ dị mfe banyere otu esi etinye ihe n'ime akpa akwa:
Ị nwere ike ime nke a na obe, ya bụ, na ala na-echekwa ihe ndị na-erughị ala, n'ime etiti bụ ịcha ahụ, akwa na akwa, wee bịa ihe kachasị.
Otu ụzọ dị mma isi mee ihe nke ọma bụ ka ha kechie ha. Buru ụzọ gbanwee uwe ndị dị n'ime, tụba ya n'ime eriri, mgbe ahụ, a ga-atụgharị ya n'ime tube.
Tinye akpụkpọ ụkwụ na akpa ma tinye ha na ala nke akpa akwa ahụ. N'ime ime ime, ị nwere ike itinye akwa nchacha, akwa na uwe.
Kedu ka esi etinye ihe n'ime akpa?
Maka akpa njem, nkwenye ndị a kọwara maka akpa akwa ahụ dịkwa mma. Mbụ ị chọrọ ime ndepụta nke ihe ndị dị mkpa, ka ị ghara iji ihe ọ bụla dị oke egwu. Jiri ukpuru di mfe ka esi agba akwa uwe ka ha wee ghara idigide:
Na ala, tinye akwa ihe na akpụkpọ ụkwụ, nke jupụtara na akpa. Tinye akwa uwe na akwụkwọ na ala.
Mgbe ị na-etinye akwa ọbọp na mpịakọta. N'elu ọdịiche dị n'agbata a ga-etinye eriri eriri, gymnastics na ihe na-emebi emebi na-adọrọ na pimply film.
Ngosiputa Ngwa na-agbakọ n'elu ma ọ bụ n'akụkụ, ọ ka mma ịzụta ego na obere ogige.
A na-atụ aro ka ị dọba akwụkwọ a pịrị apị na akpa na akpa ahụ, nke agaghị ekwe ka ihe na-agagharị akpa ahụ ma ghara iweli ibu ibu.
Kedu ka esi tinye ihe mgbe ị na-akwagharị?
Maka ịkwakọ ihe, ịkwesịrị ịkwadebe nnukwu igbe katọn, teepu mgbochi siri ike, akwụkwọ na-ekpochi, ákwà dị nro, ncha afụ na akpa. E nwere ndụmọdụ dị mfe banyere esi tinye ihe na ngwa ngwa:
Iche iche iche ihe bara uru nke i nwere ike idebe onwe gi.
Jide n'aka na ị ga-ahụ ọnụọgụ nke igbe, nke na-ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 30 kilogram. Ị nwere ike ịlele nke a site na mkpịsị aka gị, na-agbalị ịkwụsị igbe ahụ.
Na akpa plastic, mkpọ ákwà: ákwà ngebichi, akwa akwa, blanket na ihe ndị ọzọ.
Ịnakọta arịa kichin na igbe dị na ala, tinye akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ polystyrene maka nchebe. Ware, nke dị egwu, kechie ya na ihe nkedo afụ, na ihe ndị dị nkọ - oke kaadiboodu.
Karịa ịsacha ọbara site na uwe?
Uzo esi asacha ohiri isi - iwu di ocha maka ndi di iche iche
Esi ewepu akwa si akwa?
Kedu ka esi tufuo isi sịga na ụlọ?
Kedu esi asacha kettle ahụ?
Esi mee ka ọ dị ọcha na ụlọ - ụzọ kacha mma na ụzọ
Esi echekwa akpụkpọ ụkwụ?
Kedu otu esi asacha laminate?
Kedu ka esi tufuo spiders?
Kedu ka esi esi na feathers mee ka okwute?
Kedu esi ewepụ isi ísì urine si kapeeti?
Kedu esi asacha mpempe ọbara na-acha uhie uhie?
Bang nke ogologo ntutu 2014
Okporo ụzọ maka ụlọ mba
Electrophoresis na caripazime
Beet carpaccio - echiche dị iche iche maka ịme ihe ndị dị mfe ma dị ụtọ
Jay Zee na-eduzi ọnụ ọgụgụ ndị na-ede akụkọ kacha mma maka Forbes
Gini mere nwa anughi eri?
Akpa Tote - gini bu ya, gini di ihe di iche site na ihe ngbachapu, ihe iga?
Kedu ihe bụ ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2014?
Ngbaghara maka ụmụntakịrị
Romy Schneider na Alain Delon
Mkpụrụ vaịn "Na ebe nchekwa nke Negrul"
Onyinye maka nwa agbọghọ 6 afọ
Laryngotracheitis na ụmụaka
Psychology ụmụ agbọghọ
Onu ogugu ndi ozo
Gịnị na-enyere akara aka asaa nke mama nke Chineke?
Egwu nke ime ọpụpụ mbụ - mgbaàmà, ọgwụgwọ
Achicha ngwa ngwa
Ihe nkedo edere na aka aka